२५ वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य नाफा ४१ प्रतिशतले घट्यो, विस्तृत वित्तीय विवरण सहित | Notebazar
२५ वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य नाफा ४१ प्रतिशतले घट्यो, विस्तृत वित्तीय विवरण सहित
काठमाडौं। ३०श्रावण, २०७७, शुक्रबार / Aug 14, 2020 18:48:pm
गत आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा २५ वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य नाफा २८ अर्ब ४६ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को तुलनामा बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफामा ४१ प्रतिशतले गिरावट आएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा ४८ अर्ब २२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ थियो ।
कोरोना संक्रमणका कारण बैंकहरुको कार्य सम्पादन प्रभावित हुँदा आम्दानी घटेको हो । जसका कारण बैंकहरुको खुद नाफा पनि घट्यो । जसको परिणम स्वरुप बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफामा पनि गिरावट आएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण चौथो त्रैमासमा आर्थिक गतिविधि ठप्पप्राय अवस्थामा रह्यो । जसका कारण बैंकहरुले लगानी बिस्तार गर्नेदेखि कर्जा असुलीमा असर पर्दा नाफा घटेको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंक मध्ये २५ बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विबरण अनुसार जोखिम व्यवस्था वापत धेरै रकम व्यवस्था गर्नु परेकाले नाफामा थप असर गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुर्नसंरचना गर्ने, व्याजदरमा छुट दिने, व्याज पूँजीकरण गर्ने, असोज मसान्तसम्मको आम्दानीलाई असार मसान्तमा देखाउन पाइने, कर्जाको अवधि लम्ब्याउने लगायतका नीतिगत व्यवस्थाले बैंकहरुको आम्दानी झनै प्रभावित भएको हो ।
त्यसै गरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि बैंकहरुलाई माध्यम बनाउँदा बैंकका लगानीकर्ताको अपेक्षित प्रतिफलमा ह«ास आउने अवस्था उत्पन्न भएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुले ४९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कुल नाफा गरेका छन् । यो नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.१९ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले ५५ अर्ब ७१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए ।
गत आर्थिक वर्षमा २५ वाणिज्य बैंकहरुले २१ अर्ब ५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ सरकारलाई आयकर तिरेका छन् । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ८.८१ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २५ वाणिज्य बैंकले २३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ आयकर तिरेका थिए ।
गत आर्थिक वर्षमा २५ वाणिज्य बैंकले ३ खर्ब १८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ व्याज आम्दानी गरेका छन् । यो व्याज आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.३५ प्रतिशतले धेरै हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले २ खर्ब ८५ अर्ब ७१ करोड व्याज आम्दानी गरेका थिए ।
गत आर्थिक वर्षमा २५ वाणिज्य बैंकहरुले १ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ व्याज खर्च गरेका छन् । यो व्याज खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १६.५ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले १ खर्ब ५७ अर्ब ५९ करोड व्याज खर्च गरेका थिए ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले २१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ फी तथा कमिशन आम्दानी गरेका छन् । यो आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले उक्त शीर्षकमा २१ अर्ब १५ करोड रुपैंया आम्दानी गरेका थिए ।
गत आर्थिक वर्षमा २५ वाणिज्य बैंकले ३९ अर्ब ७० करोड ७९ लाख रुपैयाँ कर्मचारीमा खर्च गरेका छन् । बैंकहरुको यो खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.७१ प्रतिशतले धेरै हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले यो शीर्षकमा ३५ अर्ब ५४ करोड ६९ लाख रुपैंया खर्च गरेका थिए । यो कर्मचारी खर्च बोनस सहितको हो ।
कृषि विकास बैंक र प्रभु बैंकले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विबरण सर्वजनिक गर्न बाँकी छ । २५ वाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षमा कस्तो वित्तीय पस्किए ? सूचीमा राखिएका लिङ्कमा क्लिक गरेर हेर्न सकिन्छ ।
खुद ब्याज आम्दानी र नाफा घट्दा पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक 'नम्बर वान'
इन्भेष्टमेन्ट बैंकले साढे दुई अर्ब नाफा कमाउँदा बाड्न मिल्ने ६५ करोड
नबिल बैंकको खुद नाफा साढे १५ प्रतिशत घट्दा ११ रुपैयाँले घट्यो प्रतिशेयर आम्दानी
एनआईसी एशियाको खुद नाफा ३ अर्ब माथि, वितरणयोग्य नाफा ३३% घट्यो
हिमालयन बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३५% ले घट्यो, EPS २७.१३ रुपैयाँ
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्दा देखियो कमजोर, नाफा घट्यो
जनतासँग जोडिएको ग्लोबल आइएमई बैंकको साढे ३ अर्ब नाघ्दा यस्तो देखियो वित्तीय अवस्था
एभरेष्ट बैंकको खुद नाफामा गिरावट, लाभांश क्षमता कति ?
नेपाल बैंकमा कोरोना कहरको देखिएन ठूलो असर, वितरणयोग्य नाफा २२१ करोड
सानिमा बैंकले गत आवको नाफाबाट १२ प्रतिशत लाभांश बाँड्न सक्ने
एनसीसी बैंक विषम परिस्थितिमा पनि सबल देखियो, खुद नाफा ११ प्रतिशतले बढ्यो
माछापुच्छ्रे बैंकको खुद नाफामा २५ प्रतिशतको संकुचन, वितरणयोग्य नाफा ९० करोड ८२ लाख
गण्डकी मिसाउँदा पनि मेगाको देखिएन प्रगति, जोखिम व्यवस्था १०८% ले बढ्यो
प्राइम बैंकको नाफा ४ प्रतिशतले बढ्दा पनि प्रतिशेयर आम्दानी ३०% घट्यो
लक्ष्मी बैंकको ब्याज आम्दानी बढे पनि नाफा ६ प्रतिशतले घट्यो
एसबिआई बैंकको नाफा ३३% ले घट्यो, वितरणयोग्य नाफा ९८ करोड
सेञ्चुरी बैंकको प्रगति कायमै, खुद नाफा ९० करोड माथि पुग्दा अन्य सूचांक पनि उत्साहप्रद
नेपाल बङ्गलादेश बैंकले कमायो १ अर्ब २४ करोड नाफा, अन्य सूचक यस्ता
सनराइज बैंकले फि एण्ड कमिशन आम्दानी २० करोडले बढाउँदा पनि नाफा १८% ले घट्यो
एनएमबि बैंकको वितरण योग्य नाफा १२ प्रतिशतले बढ्यो, खुद नाफा २२७ करोड
देव:लाई प्राप्ति गरेपछि कुमारी बैंकको निक्षेप- कर्जा खर्ब माथि, जगेडा पनि मजबुत
सिभिल बैंकको कर्जा लगानी २० प्रतिशतले बढ्यो, नाफामा भने संकुचन
सिटिजन्स बैंकको चौथो त्रैमासको नाफा साढे २ करोड, प्रतिशेयर आम्दानी ४.५ रुपैयाँले घट्यो
खराब कर्जा र ब्याज आम्दानीले बैंक अफ काठमाण्डूको मुनाफा प्रभावित
सिद्धार्थ बैंकको ईपीएस चार रुपैयाँ घट्यो, वितरण योग्य नाफा ८६ करोड ६४ लाख
माछापुच्छ्रे बैंकको खुद नाफामा २५ प्रतिशतको संकुचन, वितरणयोग्य नाफा ९० करोड ८२ लाख 14/08/2020
सेञ्चुरी बैंकको प्रगति कायमै, खुद नाफा ९० करोड माथि पुग्दा अन्य सूचांक पनि उत्साहप्रद 14/08/2020
सानिमा बैंकले गत आवको नाफाबाट १२ प्रतिशत लाभांश बाँड्न सक्ने 14/08/2020
नेपाल बङ्गलादेश बैंकले कमायो १ अर्ब २४ करोड नाफा, अन्य सूचक यस्ता 14/08/2020
हिमालयन बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३५% ले घट्यो, EPS २७.१३ रुपैयाँ 14/08/2020
एनआईसी एशियाको खुद नाफा ३ अर्ब माथि, वितरणयोग्य नाफा ३३% घट्यो 14/08/2020
इन्भेष्टमेन्ट बैंकले साढे दुई अर्ब नाफा कमाउँदा बाड्न मिल्ने ६५ करोड 14/08/2020
जनतासँग जोडिएको ग्लोबल आइएमई बैंकको साढे ३ अर्ब नाघ्दा यस्तो देखियो वित्तीय अवस्था 14/08/2020